I-Actse Nse Ikpe-Etim Amanqanaba athabatha isitayile kwiQela lika-Alex Okosi
Ace Nollywood actress Nse Ikpe-Etim yayingumbono wamehlo amnyama njengoko wayefumana ikhaphethi emnyama kumsitho osondeleyo wokubhiyozela uSekela Mongameli oPhezulu kunye ne-MD ye-ViacomCBS Networks Africa kunye ne-BET International, UAlex Okosi.
Umsitho, I-Nse Ikpe-Etim ikhethe i-jumpsuit ebomvu ngu Lady Beellionaire, yambathe ingubo ende emhlophe. Imikhono emide yokutsiba iquka umqala we-V, ibhulukhwe evuthiweyo kunye neenkcukacha ezigxininisiweyo.
Nse ubenxibe impahla yokunxiba eneempompo ezimhlophe kwaye wagcina izinto zakhe ubuncinci, egqiba ukumjonga ngobuhle obuhle obuquka imilebe emnyama engacacanga, Amehlo atshayiweyo kancinci namehlo afumbeneyo.
Nazi ezinye izityholo zokubonakala kwakhe…
UFidelis Anosike, uRita Dominic kunye no-Nse Ike-Etim
Iindaba zethu zaseNigeria zooNdaba abaNtshatsheli zizisa uhlaziyo lwamva nje ngokuthandwa kweqela lakho laseNigeria, iimpembelelo kunye nabanye abadlali eNollywood kunye nomzi mveliso wokuzonwabisa waseNigeria.
Lo ngumxholo woPhuculo lweSitayile esiPheleleyo eyenzelwe abafundi bethu kuphela. Ukuba iphinde yavela kwakhona, yahanjiswa, yagqithiselwa, yaze yagcinwa, okanye ngenye indlela esetyenziswa yiyo nayiphi na indlu yokushicilela okanye iibhlog, ukusetyenziswa okunjalo kufanele kunikeze ikhonkco ngqo kule nqaku lomthombo. Ukusetyenziswa kunye / okanye ukubhaliswa kulo naliphi na icandelo lale ndawo kunokwamkelwa kwethu Imithetho neMiqathango kwaye umthetho wabucala. © isitayile Rave 2020
UAlex Nkosi UFidelis Anosike Lady Beellionaire Nse Ikpe-Etim rita Dominic
I-ICYMI: Ezi ziJamani zoMtshato zi-17 ziBukeka zinjalo ngo-2020 Kwaye zivunyiwe